Tsy miasa amin'ny iPhone ny app Zoom? Ity ny fanamboarana (ho an'ny iPads koa)! - Iphone
maty foana ny findaiko
ny fomba fanamboarana iphone vaky
tsy misy peratra mahitsy mankany am-mailaka mailaka
maninona no mandeha mainty foana ny efijery iphone-ko
Tsy miasa amin'ny iPhone ny app Zoom? Ity ny The Fix (Ho an'ny iPads koa)!
Miezaka ny hiditra amin'ny fivoriana Zoom ianao fa mety tsara. Na inona na inona ataonao dia tsy mandeha ny antso an-tsary. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao ny fomba fanamboarana ny olana raha tsy mandeha amin'ny iPhone na iPad anao ny fampiharana Zoom !
Na dia nosoratana ho an'ny iPhone ity lahatsoratra ity dia hiasa ho an'ny iPad ihany koa ireo dingana ireo! Ny fampahalalana manokana an'ny iPad dia nampiana izay ilaina hanampiana anao hamaha ny olana haingana araka izay tratra.
Hanomboka amin'ny famahana olana roa mahazatra iraisan'ny olona izahay rehefa mampiasa ny fidirana Zoom - Mikropono sy fakan-tsary. Aorian'izany dia hiresaka dingana vitsivitsy hafa momba ny famahana olana izahay raha toa ka tsy hiasa amin'ny iPhone na iPad anao ny Zoom.
Fanamboarana ireo olana mikrô
Mila manome Zoom fidirana amin'ny Mikrophone amin'ny iPhone ianao mba hahafahanao miteny mandritra ny antso an-tsary mivantana. Raha tsy izany dia tsy hisy ho afaka handre izay lazainao!
Sokafy ny fikirana ary kitiho Tsiambaratelo -> Mikrô . Hamarino tsara fa efa mandeha ny switch eo akaikin'ny Zoom.
Hevitra tsara ihany koa ny hanakatonana ireo fampiharana hafa izay manana fidirana amin'ny Microphone alohan'ny hidiranao amin'ny fivoriana Zoom. Mety miasa amina fampiharana hafa ny mikrô raha mbola manandrana miresaka amin'ny Zoom ianao!
Fanamboarana ireo olan'ny fakan-tsary
Ianao koa dia tsy maintsy manome Zoom fidirana amin'ny Fakan-tsary raha tianao ny hanana ny tarehinao eo amin'ny efijery mandritra ny fihaonambe antso. Miverina any amin'ny Fikirana -> Tsiambaratelo ary tap Fakan-tsary . Hamarino tsara fa efa mandeha ny switch eo akaikin'ny Zoom.
Zahao ireo Servers Zoom
Ireo mpizara Zoom indraindray dia mianjera, indrindra rehefa olona an-tapitrisany no manao fivoriana virtoaly amin'ny fotoana iray. Raha maty ny mpizara azy ireo dia tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny Zoom.
Zahao hoe Pejy misy ny zoma . Raha milaza izy fa miasa ny rafitra rehetra, mirosoa amin'ny dingana manaraka. Raha mihena ny rafitra sasany, izany angamba no antony tsy miasa amin'ny iPhone-nao i Zoom.
Ahoana ny fomba hamohana iphone 10
Akatony ary sokafy indray ny zoma
Ny app Zoom dia hianjera indraindray, toy ny fampiharana hafa rehetra. Ny fanidiana sy fanokafana fampiharana dia fomba haingana hanamboarana fianjerana kely na «glitch» kely.
Voalohany, mila manokatra ny switch app ianao amin'ny iPhone-nao. Amin'ny iPhone 8 na alohan'izay, kitiho indroa ny bokotra Home. Amin'ny iPhone X na vaovao kokoa, swipe avy any ambany ka hatrany afovoan'ny fampisehoana.
Raha manana iPad misy bokotra Home ianao, tsindrio indroa izany mba hanokafana ilay mpanova app. Raha tsy manana bokotra an-trano ny iPad anao dia swipe hatrany ambany ka hatrany afovoan'ny efijery. Tsy maninona na mitazona ny iPad-nao amin'ny fomba Portrait na Landscape ianao.
Swipe Zoom ambony ary avy eo an-tampon'ny efijery hanidiana azy. Tsindrio ny kisary fampiharana hanokatra azy io indray.
Jereo raha misy fanavaozana
Mamoaka tsy tapaka ny fanavaozana ny rindranasa ireo mpamorona fanatobiana mba hampiditra endri-javatra vaovao na hametahana bibikely efa misy. Tsara ny mametraka apetraky ny Zoom isaky ny misy.
Mba hijerena fanavaozana, sokafy ny App Store ary kitiho ny kaonty Account ao amin'ny zoro havanana ambony amin'ny efijery. Mikorisa mankany amin'ny faritra fanavaozana ny fampiharana. Raha misy fanavaozana ho an'ny Zoom, tap vaovao farany eo ankavanan'ny fampiharana. Afaka mitendry ianao Vaovao farany rehetra raha te hanavao ny fampiharana hafa koa ianao!
Atsaharo ny iPhone na iPad anao
Mety tsy mandeha ny Zoom noho ny olan'ny rindrambaiko iPhone izay tsy mifandray mivantana amin'ilay fampiharana mihitsy. Ny famerenana indray ny iPhone dia fomba haingana hanamboarana bibikely rindrambaiko kely isan-karazany. Mihidy voajanahary ny programa rehetra mandeha amin'ny iPhone-nao. Hisy fanombohana vaovao izy ireo rehefa averinao izany.
Amin'ny iPhone 8 na mialoha (sy iPads misy bokotra Home), kitiho ary tazomy ny bokotra herinaratra. Esory ny kisary herinaratra avy eo ankavia miankavanana hanakatonana ny iPhone-nao.
Amin'ny iPhone X na vaovao kokoa (sy iPads tsy misy bokotra Home) dia tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra sisiny sy ny bokotra volume. Swipe ny kisary herinaratra avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone.
Tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra na sisiny amin'ny iPhone na iPad anao mba hamerenana azy io indray.
Takiana amin'ny Internet ny fampiasana Zoom amin'ny iPhone. Afaka mampiasa data Wi-Fi na sela ianao!
Rehefa tsy mandeha ny Zoom dia mety noho ny olana amin'ny fifandraisanao amin'ny Internet izany. Etsy ambany, hasehonay anao ny fomba hijerena ny fifandraisana Internet an'ny iPhone. Raha manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny Zoom amin'ny alàlan'ny Wi-Fi ianao dia andramo ny angona sela (na ny mifamadika amin'izany).
Zahao ny fifandraisana Wi-Fi anao
Sokafy ny fikirana ary kitiho Wifi . Raha misy fizarana manga eo akaikin'ny anaran'ny tamba-jotra Wi-Fi anao dia mifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone.
Manandrama manodina haingana ny Wi-Fi ary miverina amin'ny alàlan'ny fanoratana ny switch eo akaikiny Wifi . Indraindray io dia afaka manamboatra glitches fifandraisana kely.
Zahao ny lahatsoratray hafa raha te hahalala bebe kokoa Dingana famahana olana Wi-Fi !
Zahao ny fifandraisana amin'ny sela
Sokafy ny fikirana ary kitiho finday . Raha ny switch eo akaikin'ny Data momba ny sela mandeha, ny iPhone dia mifandray amin'ny tamba-jotra amin'ny Wireless Wireless Network. Andramo ny manodina ny famonoana ary miverina miverina indray, izay afaka manamboatra olan'ny fifandraisana kely.
Zahao ny lahatsoratray hafa raha te hahalala bebe kokoa momba ny zavatra tokony hatao rehefa Tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny Data Cellular !
Fafao ary apetaho indray ny zoma
Mety nisy rakitra Zoom nanjary simba, izay mety hiteraka tsy fampiharana intsony ny fampiharana. Ny famafana sy ny fametrahana indray ny Zoom dia hanome anao fametrahana vaovao ary mety hamaha ny olana.
Ny kaonty Zoom anao dia tsy ho voafafa rehefa mamafa ny fampiharana ianao. Na izany aza, mila miditra indray ianao raha vao tafapetraka. Hamarino tsara fa fantatrao ny teny miafin'ny kaontinao alohan'ny hamafana ny Zoom amin'ny iPhone-nao!
Ahoana ny fomba hamafana ny fampiharana zoma
Tsindrio ary tazomy ny kisary fampiharana Zoom mandra-pisehoan'ny menio. paompy Delete App , avy eo tap Mamafa rehefa miseho eo amin'ny efijery ilay fampandrenesana fanamafisana.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny zoom
Sokafy ny App Store ary kitiho ny kiheba Fikarohana eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny efijery. Soraty ao anaty boaty fikarohana ny 'Zoom' ary kitiho karohy . Farany, kitiho ny kisary rahona eo ankavanan'ny Zoom mba hamerenanao indray ilay fampiharana.
Dial-In amin'ny fampiasana ny iPhone
Na dia mety tsy mety aza izany dia afaka miantso fivoriana Zoom foana ianao amin'ny alàlan'ny iPhone. Ny hafa ao amin'ny fivoriana dia tsy ho afaka hahita anao, fa ho afaka hihaino anao izy ireo.
Zahao ny fanasana fihaonanao amin'ny Zoom raha misy laharana finday. Avy eo, sokafy Phone ary tap ny kiheba keypad. Tsindrio ny nomeraon-telefaona fihaonana Zoom, avy eo kitiho ny bokotra finday maitso hiantsoana.
Mifandraisa amin'ny Zoom Support
Raha mbola tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny fampiharana Zoom dia tonga ny fotoana hifandraisanao amin'ny ekipa mpanohana ny mpanjifany. Mety misy olana amin'ny kaontinao izay tsy vitan'ny olona iray ao amin'ny departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ihany.
Zoom dia manolotra ny fanohanan'ny mpanjifa 24/7, ao anatin'izany ny safidin'ny telefaona sy chat. Mandehana mankany amin'ny pejy fanohanana ao amin'ny tranokalan'i Zoom hanombohana!
Azonao atao ihany koa ny manandrana mampiasa Zoom amin'ny Mac raha manana olana amin'ny iPhone na iPad ianao. Zahao ny lahatsoratray hafa hianarana ny fomba fananganana Zoom amin'ny Mac anao !
Namboarinao ny olana ary miasa indray ny Zoom. Hamarino tsara fa hizara ity mpiara-miasa aminao ity lahatsoratra ity rehefa tsy mandeha amin'ny iPhone na iPad-ny ny fampiharana Zoom! Manantona anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany raha manana fanontaniana hafa ianao.